फ्लाइट नम्बर क्युआर ६५२ : अफवाहले पुर्‍यायो अस्पताल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
फ्लाइट नम्बर क्युआर ६५२ : अफवाहले पुर्‍यायो अस्पताल
उदयपुरको बेलका नगरप्रमुखले राखेको गलत स्टाटसका कारण वडा ३ रातापानीका विद्यानन्द चौधरीले अनाहक सास्ती खेप्नुपरेको छ । उनी भन्छन्, ‘यति दुःख दिएछ मलाई मान्छेहरुले, उल्टै बिरामी बनाउन लगाएछ । के हो, कसो हो, मैले त केही मेसो पाइरा छैन ।’
चैत्र १३, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले मंगलबार सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । उनले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ रातापानी गाउँका विद्यानन्द चौधरी कतारबाट आएको र उनी संक्रमण पुष्टि भएकी युवती चढेकै कल साइन ६५० को विमानमा आएको उल्लेख गरे । फेसबुक र अन्य सामाजिक सन्जालबाट फैलिएको गलत सूचनामा भर परेर उनले उक्त स्टाटस लेखेका थिए । जबकि कोभिड १९ (कोरोना) संक्रमित युवती आएको विमान क्युआर ६५२ थियो ।
मेयर थापाले पछि आफूलाई गलत रिपोर्टिङ गरिएको भन्दै फेसबुकमै लेखे तर गलत पुष्टि हुनुअघि नै उनले यो असत्य तथ्यको सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवसम्मलाई गराइसकेका थिए । मेयरको गलत तथ्यसहितको स्टाटस एकैछिनमा भाइरल भयो । अनि मेयरको भनाइ भन्दै स्थानीय पत्रकारले सन्देश आ–आफ्नो फेसबुकवालमा साभार गरेर पोस्ट गरिसकेका थिए ।
गलत तथ्यबाट फैलिएको हल्ला यतिमै सीमित रहेन । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ३५ वर्षीय विद्यानन्दको टिकट हेर्दा थाहा हुन्छ, उनी संक्रमित युवती आएको भोलिपल्ट अर्थात १८ गते काठमाडौं आएका रहेछन् । मेयरको स्टाटसबाट फैलिएको हल्लाले स्थानीय पनि सशंकित भए । विद्यानन्दका अनुसार मंगलबार बिहानै उनलाई नगरपालिकाको कर्मचारी बताउने एक जनाले फोन गरेर तुरुन्तै स्वास्थ्य जाँच गर्न नगरपालिका आउन भने । के भएछ भनेर विद्यानन्द आठै बजे खाना खाएर नगरपालिकातिर जाँदै थिए । बाटोमा भेटिएका एक जनाले अहिले नगरपालिका जान नपर्ने भयो, घरमै फर्केर बस्नुस् भने । त्यसपछि उनी आएकै बाटो घर फर्किए ।
झन्डै साढे चार बजेतिर विद्यानन्दको घरमा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी गाडी लिएर पुगे । उनले सुनाए, ‘त्यतिबेलासम्म पनि कसम मलाई के भइरहेको हो ? के गर्छ भन्ने थाहा थिएन ।’ गाडी लिएर प्रहरी आएलगत्तै एम्बुलेन्स आइपुग्यो । त्यतिन्जेलसम्म विद्यानन्दको घरवरपरका मान्छेको हुल आँगनछेउछाउमा जम्मा भइसकेको थियो । उनले भने, ‘वरपरका सबै मान्छे रमिता हेर्न आएकोझैं गरेर आइरहेका थिए ।’
विद्यानन्दलाई लैजाने बेलाको तस्बिर मेयर थापाले पनि फेसबुकमा राखेका छन् । जसमा उनलाई लिन आएकाहरुले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएको देखिन्छ । विद्यानन्दले भने त्यतिबेला सामान्य कपडाको मास्क मात्रै लगाएको देखिन्छ । उनले भने, ‘एम्बुलेन्सको पछाडि म र बूढी बस्यौं ।’ जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको गाइडलाइनमा सम्भावित संक्रमितसँगै अरु मान्छेलाई राखेर अस्पताल लैजाँदा संक्रमण भएको रहेछ भने सर्ने जोखिम रहन्छ ।
विद्यानन्दलाई धरानको घोपा क्याम्पस्थित बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स पुर्‍याउँदा ७ बज्नै आंटेको थियो । बिहान ८ बजे नै खाना खाएका विद्यानन्दले त्यतिबेलासम्म केही खान पाएका थिएनन् । अस्पतालले उनलाई एउटा कोठाभित्र हुल्यो । उनका अनुसार जहां उनी जस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका धरानकै एक मान्छे थिए । राति दस बजेतिर डाक्टरले उनको नाक र मुखबाट स्वाब निकालेर परीक्षणका लागि लगेका छन् ।
विद्यानन्दले सुनाए, ‘मलाई किन ल्याएको ? कति दिन राख्ने हो केही पत्तो छैन ।’ त्यसो त दिनभर भोकभोकै बसेका विद्यानन्दलाई राति १२ बजेतिर एक जना स्टाफ नर्सले एउटा चाउचाउ र पानी खान दिइन् । उनकी श्रीमती रीताले आफू पनि राति १२ बजेसम्म अस्पतालबाहिरै बसेको र पछि कर्मचारीसँग हारगुहार गरेपछि अस्पतालकै बिरामी राख्ने एउटा वार्डमा टुक्रुक्क बसेर रात कटाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जाँच गरेर राति नै फर्किने हो भन्थ्यो । त्यही भएर कपडा पनि ल्याइनँ । चिसै रात काटें ।’
फ्रान्सबाट फर्किएकी युवतीमा कोरोना : विदेशी साथीलाई संक्रमण देखिएपछि परीक्षण
छुट्टीमा जाने–आउने गरेर पछिल्ला दस वर्षदेखि कतारमा मजदुरी गर्दै आएका विद्यानन्द पछिल्लो पटक सात महिना पहिले मात्र कतार पुगेका थिए । कोरोनाको त्रास बढेपछि कम्पनीले बिदा दिएर घर फर्केको सुनाए । उनले घर फर्केपछि आफूलाई रुघा, खोकी, ज्वरोजस्तो केही समस्या नदेखिएको सुनाए । उनले भने, ‘हल्लैहल्लामा मलाई यता ल्यायो ।’
विद्यानन्दका कान्छा भाइ गोठालो काम गर्छन् । उनले दाइलाई भाइरस लाग्यो भनेर गाउँमा हल्ला चलेको र नयाँ–नयाँ मान्छेले सोधिरहेको सुनाए । उनले मंगलबार मात्रै मास्क र हेल्मेट लगाएको एक जनाले बाटोमै रोकेर तेरो दाइ कतारबाट फर्केपछि कहाँ कहाँ गयो, नढाँटी भन् भनेको सुनाए । उनले भने, ‘उताबाट फर्केको भोलिपल्ट दाइ गाउँका २० जनासँग कोसी टप्पुमा माछा मार्न गएको थियो भन्दिएँ । अनि त्यो मान्छेले बीसै जनाको नाम टिपेर लग्यो ।’
विद्यानन्दले आफू रोगले भन्दा पनि गाउँमा फैलिएको हल्लाले बिरामी हुन लागेको सुनाए । उनले भने, ‘यति दुःख दिएछ मलाई मान्छेहरुले, उल्टै बिरामी बनाउन लगाएछ ।’ उनले आफूसँग गोजीमा ५ सय मात्र भएको र कति दिन बस्नुपर्ने हो भनेर कसैले नभनेको सुनाए । उनले भने, ‘के हो कसो हो, मैले त केही मेसो पाइरा छैन ।’
बेलका नगरपालिकाका मेयर थापासँग भने सम्पर्क हुन सकेन । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशीले नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा शंका लागेको भएर जाँच गर्न लगेको बताए । उनले भने, ‘अब केही दिनमा नगरपालिकामै क्वारेन्टाइन बन्छ अनि शंका भएकालाई त्यहीं राख्छौं ।’
मेयर थापाले त आफ्नो स्टाटस हटाएर नयाँ सूचना लेखे । तर उनले हटाएको पुरानो स्टाटस कपी गर्ने र त्यसको स्क्रिनसट राख्नेहरुबाट उक्त गलत तथ्यसहितको खबर फैलिइरहेको छ । कतिले त उक्त स्टाटसको स्क्रिन सट ट्वीटरमा पनि राखे । यसरी राज्यले समयमै सही सूचना प्रदान गर्न नसक्दा सामाजिक सन्जालमा अफवाह निरन्तर फैलिरहेको छ । जसबाट विद्यानन्द जस्ताले हैरानी खेपिरहेका छन् ।
संक्रमित युवती चढेको विमानमा ४० जिल्लाका यात्रु
फ्रान्सबाट कतार हुँदै काठमाडौं आएकी संक्रमित पुष्टि भएकी किशोरी चढेको विमान क्यूआर ६५२ मा सवारमध्ये १ सय ९ जना ४० जिल्लाका नागरिक भएको पुष्टि भएको छ ।
पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका यात्रु उक्त विमानमा सवार थिए । १ सय ५८ यात्रु सवार विमानमा एक फ्रेन्च, दुई जर्मन र दुई भारतीय थिए । अन्य ४४ जना नेपाली कुन जिल्लाका थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार संक्रमित युवती सवार विमानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २७ यात्रु प्रदेश २ का थिए । यो प्रदेशअन्तर्गतका महोत्तरीका ११, सर्लाहीका ४, धनुषाका ९, सप्तरीका २ र बाराका १ जना छन् । एकाधबाहेक उक्त विमानमा सवार अधिकांश यात्रु वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार रहेको बुझिएको छ ।
उक्त विमानमा सवार सबै यात्रुमा संक्रमणको जोखिम रहनसक्ने भएकाले ती यात्रुहरु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य समस्या देखिए जाँच गराइहाल्नुपर्ने हुन्छ । तर संक्रमणको पुष्टि भएको तेस्रो दिन भइसक्दा पनि उक्त विमानमा सवार सबै यात्रुसँग सरकारी सम्पर्क हुन सकेको छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले उक्त विमानमा आएकामध्ये १३ जना आइसोलेसनमा बसेको थाहा भएको र अरूको खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुको अवस्था बुझ्न मंगलबार देशैभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरिसकेको थियो ।
टेकुस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका यात्रु पनि वैदेशिक रोजगारीबाट ६ गतेमात्र काठमाडौं फर्किएको देखिन्छ । यसअघि संक्रमण पुष्टि भएकी किशोरी पनि फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी थिइन् ।
यी दुवै घटनाबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार जोखिममा हुन सक्ने र एउटै विमानमार्फत फर्किएका कामदारलाई पनि संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने देखिएको छ । दुवै विमान कतार एअरवेजको रहेको र कतारको दोहाबाट आउने उक्त विमानमा अधिकांश घर फर्किने कामदार रहने देखिन्छ ।
४ गते काठमाडौं आएकी युवती सवार विमानबाट यात्रुहरुको विस्तृत विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले अध्यागमन विभागबाट लिइसके पनि बुधबारको संक्रमित चढेको विमानका यात्रुको विवरण प्रहरीले बुधबार साँझसम्म पनि पाएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पछिल्लो संक्रमित व्यक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको कामदार भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा नपाएको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:२२
१२५ यात्रीको पहिचानपछि निगरानी
फ्रान्सबाट आएकी संक्रमित युवतीसँगै विमानमा यात्रा गरेकाहरूको नामावली भेटिएपछि प्रहरीले आफ्ना युनिटलाई निगरानीको निर्देशन दिएको छ । अर्कै विमानको फोटो समाजिक सजालमा भाइरल भएपछि अरू यात्रु प्रस्टीकरण दिँदै हैरान छन् । संक्रमित हुन सक्ने शंका गरिएकाहरूको छानबिन र क्वारेन्टाइनका प्रक्रियाबारे सरकारले अझै प्रस्ट्याएको छैन ।
चैत्र १२, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएको विमानमा यात्रारत १९ वर्षीया युवतीमा कोभिड– १९ (कोरोना) संक्रमण पुष्टि सँगै सवार अन्य यात्रुको खोजी सुरु भएको छ । उक्त विमानबाट ती युवतीसँगै नेपाल आएका एक सय २५ जनाको नाम ठेगाना प्रहरीले पत्ता लगाएको बताएको छ ।
सरकारी निकायबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएसँगै उक्त विमानमा सँगै आउने अन्य यात्रुबारे चासो बढेको छ । उक्त विमान कति बजे अवतरण भएको थियो, त्यसको कल साइन कति थियो र कति यात्रु थिए भन्नेबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । योसँगै सामाजिक सञ्जालमा उक्त दिन कतारबाट काठमाडौं ओर्लेका यात्री लक्षित अफबाह फैलिन सुरु भएको छ ।
संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन करिब १ बजेतिर सकिएको थियो । फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी युवतीमा संक्रमणको पुष्टि भएको बताउंदै स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त विमानमा आउने अन्य यात्रुको खोजी गरिने बताएका थिए । तर पत्रकार सम्मेलनमा कुन कल साइनको विमानमा कति बजे ती संक्रमित यात्रु आएकी हुन्, त्यसमा कति यात्रु थिए भन्ने बताइएको थिएन । सरकारी तवरबाट औपचारिक रूपमा जानकारी नआए पनि पत्रकार सम्मेलन सकिएको एक घण्टालगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा फोटो भाइरल हुन थालिसकेको थियो । उक्त फोटोमा कतार एअरवेजको विमान उडिरहेको देख्न सकिन्छ । जसमा लेखिएको छ, ‘क्यूआर ६५० मा चैत ४ गते जो कोही चढेर नेपाल आउनुभएको छ भने आफूलाई तुरुन्त चेकअप गराउनुहोला ।’
सामाजिक हितका निम्ति भन्दै राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारीहरू, साहित्यकार र केही सञ्चारकर्मीहरूले नै जोडतोडले सेयर गरिरहेका थिए । तर कान्तिपुरले अध्यागमन विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसंग गरेको कुराकानीले उक्त कल साइनको विमानमा ती संक्रमित यात्रु नआएको पुिष्ट हुन्छ । उक्त विमान चैत ४ को साँझ ७ बजे विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । जबकि संक्रमित यात्रु आएको विमान सोही दिन १ सय ५८ यात्रुसहित बिहान चैत ४ गते १० बजेर १२ मिनेटमा अवतरण भएको देखिन्छ ।
कतिसम्म भने सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले गलत सन्देश भएको विमानको फोटोकै आधारमा उक्त विमानमार्फत यात्रा गरेका यात्रुको नाम र ठेगाना नै सार्वजनिक गरेर ती यात्रुबाट जोगिन अपिल गरेको देखिन्छ । सोमबार नै पत्रकार कनकमणि दीक्षितले ट्विटरमा कतार एअरवेजको कल साइन क्यूआर ६५० मा यात्रा गरेर काठमाडौं आएका यात्रुहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गरे ।
पछि सोही विमानमार्फत यात्रा गरेका एक यात्रुले आफू आएको विमान संक्रमितले यात्रा गरेको विमान नभएको ट्विटरमा बताए । कोरोना संक्रमित व्यक्ति संक्रमित आएको विमान क्यूआर ६५२ रहेको बताएपछि ३ लाख २१ हजार फलोअर्स भएका दीक्षितले यही ब्योहोरा लेखेर माफी मागे । उनी मात्र होइन पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पनि बिनापुष्ट×्याइँको गलत सन्देश फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे ।
मंगलबार ५ बजेसम्म उक्त गलत सन्देशसहितको स्टाटस ३ सय ४९ जनाले सेयर गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने उपाध्यायको पोस्टमा कैयनले संक्रमितको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । रामहरि रिमाल नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले त झन् कोरोना लागेको मान्छेको तीनपुस्ते विवरण र तिनलाई भेटेका मान्छेको नाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएको हल्लाकै कारण गलत कल साइन भएको विमानका यात्रुहरू आइसोलेसनमा बस्ने र संक्रमित यात्रु आएको विमानका यात्रुहरू बेफिक्री रहने जोखिम बढेको छ । यद्यपि मंगलबार साँझसम्म पनि अध्यागमन विभागले संक्रमित यात्रु चढेर आएको विमानबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन । न उक्त दिन आगमन कक्षमा कार्यरत अध्यागमन अधिकारीहरूलाई नै सचेत गराएको छ ।
कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही अध्यागमन अधिकारीले संक्रमित चढेर आएको विमानको कल साइन क्यूआर ६५२ र बिहानका समयमा आएको पुष्टि गरे । एक अधिकारीले भने, ‘उक्त विमानबारे नभन्नू भन्ने आदेश छ । कल साइन थाहा हुँदा व्यक्तिको पहिचान खुल्ने र समस्या आउँछ भनेर नबोल्नू भनिएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको अफबाहकै कारण कतिपयले व्यक्तिको नाम नै किटेर सामाजिक सञ्जालमा ‘ती व्यक्तिबाट सतर्क हुनुस्’ भन्नेजस्ता सन्देश पनि फैलाइएका छन् । कतिपयले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफू उक्त विमानमा चढेर नआएको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीले संक्रमित यात्रुसँगै यात्रारत यात्रुहरूको परिचय खोलेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु गोपनीयताको हकविरुद्धको काम भएको भन्दै व्यक्तिको परिचय खोल्ने काम गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले व्यक्तिको परिचय खोल्दा सामाजिक रूपमा हुने व्यवहारमा परिवर्तन आउने वा अनय घटना हुने जोखिम रहन्छ ।’
त्यसो त संक्रमणबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत अनेकन अफबाह फैलाउने, झूटा तथ्यहरूको प्रचार गर्नेहरूमाथि पनि प्रहरीले निगरानी बढाइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको विशेष टिमले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाएको र अफबाह फैलाउनेको पहिचान थालिएको डीआईजी क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा के लेख्दै छु, आफूले लेखेको विवरण सत्य हो कि होइन, त्यसले अफबाह फैलाउँछ कि फैलाउँदैन भनेर व्यक्तिगत रूपमै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।’
संक्रमितसँगै यात्रा गरेकाहरू खोजिँदै
सोमबार मध्याह्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित युवतीको पुष्टि गरेसँगै साँझ प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनबाट उक्त युवती सवार विमानमा रहेका यात्रुहरूको विवरण (प्यासेन्जर म्यानिफिस्टो) झिकाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक एसपीसहित चार डीएसपीसहितको टोलीले यात्रुहरूको राहदानीका आधारमा यात्रुहरूको ठेगाना र सम्पर्क खोजी गरेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी क्षत्रीका अनुसार मंगलबार साँझसम्म क्यूआर ६५२ विमानमा यात्रा गरेर आएका एक सय २५ जनाको ठेगाना पत्ता लगाइएको छ । उनका अनुसार ठेगाना पुष्टि भएका यात्रुहरूको जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत ती यात्रुसँग सम्पर्क कायम गरिने र उनीहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न भनिने बताए । उनले भने, ‘आइसोलेसनमा बसे–नबसेको र उनीहरूको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिए–नदेखिएको रेखदेख स्थानीय प्रहरीले गर्नेछ ।’
जसको पहिचान खुलाइयो
संक्रमित युवतीसँगै विमानमा यात्रा गरेर आएकाहरूलाई सरकारी तवरमै सम्पर्क गरेर आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्ने काम नभएपछि सामाजिक सञ्जालबाटै उक्त विमानमा आएका यात्रुहरूको परिचय सार्वजनिक गर्ने काम हुन थालेको छ । जस्तो कि, पश्चिम बागलुङका एक युवा उक्त विमानको आएको भन्दै उनको नाम, ठेगाना खुलाएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको स्टाटस सयौं जनामाझ सेयर भएको देखिन्छ ।
कतारबाट आएका ती युवा एक दिन काठमाडौं बसेर गत बुधबार गाउंँ पुगेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको परिचय खुलेपछि स्थानीय तहका प्रमुखले ती युवालाई आइसोलेसनमा राखेर परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सरकारी तवरबाटै संक्रमित वा उनीसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई सजग गराउँदै आइसोलेसनमा राख्ने काम सामाजिक सञ्जालमार्फत हुँदा ती व्यक्तिको परिवार, आफन्त र स्थानीयमाझ घृणा फैलिने जोखिम देखिन्छ ।
फेसबुकबाट फैलिएको अफवाहको असर उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पनि पर्‍यो । स्थानीय स्वस्तिक थापाले नगरपालिकाका एक व्यक्तिको नाम र ठेगाना नै किटेर उनी संक्रमित युवती चढेको विमान भन्दै क्यूआर ६५० बाट आएको भन्दै स्टाटस लेखे । जबकी संक्रमित युवती आएको विमान क्यूआर ६५२ थियो ।
तर असत्य सूचनाको विश्वासमा परेर उनले ती व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर काम गरेको भन्दै यसबारेको सूचना आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवसम्मलाई गराएको बताए । उनको स्टाटस एकैछिनमा भाइरल भयो । अर्का स्थानीय नवीन बाबुले पनि यस्तै आशयको स्टाटस लेखे । उक्त स्टाटस पनि ४२ जनाले शेयर गरे ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ०७:३७